कार्यकक्ष नपुगी बाटोबाटै हराएका सात हजार कर्मचारी खोज्न कार्यदल ! - Everest Dainik - News from Nepal
कार्यकक्ष नपुगी बाटोबाटै हराएका सात हजार कर्मचारी खोज्न कार्यदल !
काठमाडौं, असोज ९ । स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारी कार्यालयमा नपुगेपछि उनीको खोजी गर्न सरकारले आइतबार उच्चस्तरीय अनुगमन टोली गठन गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका उपसचिव सदस्य रहेको अनुगमन टोली गठन गरेको हो ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार सरकारले विभिन्न मन्त्रालय र निकायबाट देशभरका स्थानीय तहमा १२ हजारभन्दा धेरै कर्मचारी खटाए पनि करिब ५ हजार कर्मचारीमात्र कार्यालयमा पुगेका छन् ।
याे पनि पढ्नुस एमाले–माओवादी कार्यदलको मोडालिटी तयार, भोलिबाटै काम तीब्र पार्छाै: वर्षमान पुन
बाँकी ७ हजार कर्मचारी कहाँ छन् सम्बन्धित सरकारी अधिकारीलाई कुनै जानकारी छैन । खटाइएको कार्यालयमा नपुगेका कर्मचारी खोजी गर्न र अवस्था पत्ता लगाउन अनुगमन टोली गठन गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले जनाएको छ । –अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकबाट